Hay?adda Bish Cas Iran oo qorshaynaysa inay dib goobahoodii ugu celiso 4,000 oo qoys, kuwaasoo horay uga soo barakacay gobollada dhexe. – Radio Daljir
Hay?adda Bish Cas Iran oo qorshaynaysa inay dib goobahoodii ugu celiso 4,000 oo qoys, kuwaasoo horay uga soo barakacay gobollada dhexe.
Moqdisho, Nov, 02 ? Hay?adda Bisha Cas Iran ayaa waxay qorshaynaysaa xilligaan inay dib goobahoodii ugu celiso ku dhawaad 4,000 oo qays, kuwaasoo xilligaan ku sugan magaalada Moqdisho, horayna uga soo barakacay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya.
Shariif Cabdalla Maxamed oo ah agaasimaha xafiiska Soomaaliya u qaabisan hay?adda Bisha Cas Iran oo u waramay warbaahinta Moqdisho ayaa sheegay in hay?addu xilligaan ay qoysaskaasi gacanta u galisay sahay ay ku noolaan karaan muddo 3 billood ah, isla markaana ay la kaashan-doonaan raxmada Alle ee ka da?day meelo badan oo ka mida gobollada dhexe ee dalka.
Madaxa ugu sareeya hay?adda Bisha Cas Iran Shariif Cabdalla ayaa sheegay, in qoysaskaasi sidoo kale ay ka caawin doonaan sidii ay dalagyadooda beeraha dib ugu beeran lahaayeen, waxaana mudane Shariif isagoo sii wata hadalkiisa uu hay?addaha deeq-bixiyaasha ugu baaqay inay ka qayb-qaataan sidii dib loogu celin-lahaa qoysaskaan guryihii ay kasoo hayaameen.
Magaalada Moqdisho ayaa waxaa ku sugan kummanaan qoys, kuwaasoo qaar-kood ay dhaafeen xoolihii, halka kuwa kalena ay macaluusha ka jirta dalka saamayn daran ku yaalatay.